Home Wararka Qarax ka dhacay agagaarka xerada Xalane ee Muqdisho
War hadda nasoo gaaray ayaa sheegay in qarax uu ka dhacay meel u dhow albaab laga galo xerada Xalane ee shisheeyaha ay degan yihiin ee magaalada Muqdisho.
Sida aan xogta ku helnay, qaraxa ayaa ka dhacay degmada Wadajir, gaar ahaan inta u dhaxeeysa bar kontorool oo laga galo Xalane iyo xerada Jeneraal Gordon.
Sida ay noo xaqiijiyeen goobjoogeyaal, waxaa qaraxa lala beegsaday
maqaayad ku dhow meel lagu qaado canshuurta dowlada hoose, balse weli ma cadda nooca uu ahaa qaraxa, inkasta oo warar horudhac ah ay sheegayaan inuu ahaa is-miidaamin.
Goobjoogeyaasha ayaa sidoo kale sheegay inuu jiro khasaare ka dhashay qareaxa, balse weli ma cadda tirada rasmiga ah.
Qaraxa ayaa imanaya toddobaad kadib markii MOL ay shaacisay xog ku saabsan digniin kasoo baxday xafiisyada amni ee ay hay’adaha ajnabiga ah ku leeyihiin Muqdisho, gaar ahaan xarunta Xalane iyo sirdoonka Soomaaliya, oo ku saabsaneyd inay Muqdisho ka dhici kaaraan weeraro culus.